Central Youth Link -Central Youth Link
Posted on September 4, 2015 by Abdulqadir Hassan
Annagoo ah muwaadiniin soomaaliyeed kuna midoobay hey’adda Codka Dhallinta soomaaliyeed ee (CYL) oo og dhibaatooyinka (siyaasadeed, nabad gelyo, dhaqaale iyo bulshadeed) ee ka taagan dalkeenna ayaan waxan go’aansannay in aan taageero iyo garab istaag u fidinno cidkasta oo aan isleennahay maanta waxay samata bixin karta Soomaaliya.
Dhawaan waxaa dhidibada loo taagey maamul goboleedka Gal Mudug (GM) sidoo kale dowlad goboleedka GM waxay soo dhiseen gole wasiirro. Dhamaantood waxaan u direynaa hambalyo iyo bogaadin, si gaar ah waxaan ugu hambalyeyneynaa agaasimihii hore ee Hey’adda CYL oo kasoo dhexmuuqday golaha wasiirada GM.
Codka Dhallinta soomaaliyeed ee (CYL) waxay talo usoo jeedinayaan guud ahaan golaha wasiirrada GM, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ee maamul goboleedka Gal Mudug.
Maamul goboleedka GM waxaan ugu baaqeynaa in ay si firfircoon uga qeyb qaatan dib u dhiska dalka, loona dhego nuglaado dowladda dhexe ee Soomaaliya si looga gudbo is barbaryaacii ragaadiyey horumarka dalka, isla markaana uu maamulka GM tusaale u noqdo dhammaan mamul goboleedyada kale ee Soomaaliya maanta ka jira ee aan islana socon kalana socon.
Codka Dhallinta soomaaliyeed ee (CYL) waxay talo usoo jeedinayaan guud ahaan golaha wasiirrada GM, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ee maamul goboleedka Gal Mudug in ay si firfircoon uga qeyb qaadato dib u dhiska dalka loona dhago nuglaado dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo tusaale ay u noqonayso dhammaan mamul goboleedyada kale ee Soomaaliya maanta ka jira.
Codka Dhallinta waxay ay ku baraarujineysaa dhammaan maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya maanta in ay muujiyaan midnimo, isku duubnaan, kala danbeyn, is tixgelin iyo is xurmeyn si sare loogu qaado geeddi socodka wanaag abuurista iyadoo la hiigsanayo hogaaminta dalka iyo dadka soomaaliyeed ee qaran la’aanta ahaa ku dhawaad 25 sano, welina aad mooddo inaan loo bislaan u deg degidda halka masalxadda dadka iyo dalku ay ka dhow dahay.
Waa in go’aamada GM ay salka ku hayaan danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed, iyadoo is fahamka iyo isla garashada ummadaha dantu kala dhexeyso aad loo tixgelinayo.
Waa in daacadnimo, geesinimo, dadaal, garasho iyo hufnaan laga muujiyo shaqada loo hayo shacabka Soomaaliyeed si uusan wax qabadku khasaare u keenin .
Hey’adda Codka Dhallinta (CYL) waxay ku baaqeysaa in la abuuro iskaaashi siyaasadeed oo salka ku haya, waddaniyad iyo is xurmeyn lana ogaado in siyaasaddu tahay shaqo sare oo lagu gaarayo ujeeddooyin sare sido kale la wanaajiyo xiriirka GM kala dhaxeeya dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya .
Ugu danbeyn waxaan u mahadnaqeynaa Allihii na abuurtay ee noo suurageliyey caafimaadka iyo xoriyadda aan maanta haysanno kadibna waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo tixgelisa taladeenna dhammaan ama qayb kamid ah gaar ahaan wasiirrada GM ee uu ugu horeeyo wasiirka qorsheynata mudane Cabdulqaadir Axmed Warsame oo xusuus iyo tixgelin gaar ah ku leh Hey’adda CYL.
Posted on May 28, 2015 by Abdul
Sawirkii Xamza Maxamed
“Calaf nimuu u diidoo cuni waaya mooyee, ciideenu waa hodan”. Dhulkeena oo Eebbe ku mannaystay xeebta ugu dheer Afrika, 3 webi, beero, xoolo nool iyo kalluuna leh ayaan intifaacsigiisii dhabta ah loo soo jeesan wali! Walow ay dowladdii KACAANKU in badan isku dayday ku baraarujinta dadka Soomaaliyeed ka faa’iideysiga khayraadka dalka, sida jillaabashada iyo cunidda ” kalluunka”, ayadoo loo sameeyay maalmo gooni ah oo la joojiyay qalitaanka xoola si loo cuno kalluunka ayaan dadaalladaas dheg daloosha Ku dhicin.
Dadaalladaas iyo kuwo kaloo badan oo looga gollaah isku tiirsanaanta iyo kordhinyta wax-soo saarka dalku, si dhab ah ugama daadegin quluubta dadweynaha Soomaaliyeed, lamana garanayo sababta gaarka ah ee kalliftay arrintaas, marka laga reebo tuhunka ah “waxaaga lagaa indho saab!”
Si kastba ha ahaatee, waxaa jirta xaqiiq ah in dadkeenu la qabsaday Ku tiirsanaanshaha deeqaha aan buurreyn ee dibindaabyada Ku ah beeraqodoshada iyo ka faa’iideysiga khayraadka dabiicigaa. Waxaa beryahan dambe dhaqan noqotay gacmo ka laabashada wax-soo saarka iyo sugidda sumuniyo iyo soor shisheeye oo helitaankeedu dhib badanyahay. Waxaad arkaysaa beerihii Afgooye, Jowhar iyo magaalooyin kale oo dadkii ay xeryo ka buuxaan ayagoo sugaya gar-gaar raashin oo 15 gacmood soo maraya. Inahaas iyo kuwo kaloo badan oo jira anakoo ka duuleyna, soo ma haboona in aan u kacno lasoo bixidda nimcada baddeena iyo birrigeena ceegaagta?
Posted in Youth	| Comments Off on Dalkeenu Waa Hodan
Posted on May 7, 2015 by Abdul
Talaado, May 7, 2015, Ururka isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Central Youth Link (CYL), ayaa maanta kulan wadatashi ah ugu qabtay degmada Cadaado ee xarunta shirka maamul u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay dhaqanka qeybihiisa kala duwan, gaar ahaana odayaasha dhaqanka, nabadoonada, cuqaasha, iyo dhalinyaro ka kooban rag iyo dumar, waxaana kulankan o dadaka soo xaadira ay ahaayeen 110 qof, diirada lagu saaray sidii ay qeybaha kala duwan ee bulshada gobolada dhexe isaga wareysan lahaayeen halka uu marayo dhisidda maamul sameynta, iyo sidii ay talo iyo tusaaleba u siin lahaayeen dhinacyada ku howlan dhismaha maamulka.
Kulanka oo ka dhacay hoolka shirarka ee Jaamacadda Iftin ee degmada Cadaado ayaa waxaa ka hadlay odayaal kala duwan kuwaasoo ka warbixiyay inta ay kala socdaan dhismaha maamul sameynta, waxayna xuseen in heer wanaagsan uu marayo yagleelida maamulka, iyaga oo rajo ka muujiyay inay soo baxdo natiijo wanaagsan.
Agaasimaha guud ee ururka isku xirka dhalinyarada (CYL), Mudane Cabdulqaadir Axmad Warsame oo madasha ka hadlay ayaa odayaasha iyo dhalinyarada ku baraarujiyay muhiimada talada dhaqanka iyo dhalinyarada, wuxuuna xusay in labadaasi qeybood ay udub dhexaad u yihiin bulsho kasta, sidaasi owgeedna ay uruurinayaan ra’yigooda, ayna u gudbin doonaan dhinacyada ku howlan maamul dhisida, si natiijada soo baxda ay u noqoto mid la wada leeyahay, lana ilaashado.
Xasan Qaasim Warsame oo kulanka ka hadlay ayaa ku taliyay in ergooyinka shirka ay ansixiyaan oo kaliya Dastuurka maamulka gobolada dhexe, kadibna odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada Baarlamaanka, si ay u doortaan madaxweynaha, si loo helo maamul rasmi ah oo aan kumeel gaar aheyn.
Sidoo kale, kulankan ayaa waxaa looga tashaday sidii loo sixi lahaa wadada toosanna loo marin lahaa habka dhismaha maamulka, gaar ahaana xulista, odayaasha dhaqanka, ergooyinka, iyo xildhibaanada uu yeelan doono Baarlamaanka Maamulka Gobolada Dhexe ee Galgaduud iyo Mudug.
Gaba gabadii kulanka ayaa waxaa u suurtagashay ururka isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed CYL, inay isku duwaan isla markaana uruuriyaan talooyin badan kuwaasoo ay la wadaagi doonaan qeybaha ay khuseyso maamul dhisida gobolada dhexe.
 In Ergada loo xil saaro ansixinta dastuurka oo kaliya, baarlamaankana ay odayaasha dhaqanku soo xulaan, kaddibna ay doortaan madaxweyne, si looga baaqsado samaynta Maamul KMG.
 In la xareeyo odayaasha iyo ergada hartay, lana qanciyo beelaha aan wali soo xarayn odayaashooda iyo ergadooda.
 In dhallinyaradu kaalin mugleh ku yeeshaan geeddi-socodka dhisidda maamulka gobollada dhexe, isla mar ahaantana ay qayb muuqata ku yeeshaan hoggaanka hay’adaha maamulkaas la dhisi doono.
 In laga dhawro hab-socodka shirka faragalin kasta oo aan munaasab ahayn dhankay doontaba haka timaaddee
 In cid kasta guddiga farsamadu uu noqdo mid bulshada ay heli karto, goorta ay rabaan si talo iyo tusaaleba loogu biiriyo, loogana saxo khalad kasta oo bulshadu dareento
Posted in Youth	| Comments Off on Ururka isku xirka dhalinyarada (CYL) oo kulan wadatashi ah ugu qabtay Cadaado odayaal iyo dhalinyaro
Posted on December 20, 2014 by Abdul
Barnaamijka dhiirrigelinta qoraaga Soomaaliyeed, waa barnaamij ay Central Youth Link ugu talo gashay, sare u qaadidda xaddiga agabka ku qoran Af-Soomaaliga. Waxaa sidoo kale looga gol leeyahay barnaamijkaan in lagu himmad geliyo da’yarta Soomaaliyeed ee jecel in ay afkooda hooyo wax ku qoraan.
Barnaamikaan oo ah kii labaad ee ay Central Youth Link isku taxalujisay qabsoomiddiisa ayaa maalintii Jimcada ee ay taariikhdu ahayd 19/12/2014 waxaa lagu soo bandhigay buug ay qortay Muno Maxamed Diirshe, kaasoo ay kaga hadashay dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed kasoo gaaray colaadaha, iyo tacadiyada ay kala kulmaan waddamada shisheeye ee ay maganta u yihiin.
Waxaa sidoo kale fursad u helay golahan, Abuukar Aadan iyo Cabdimuncim Xaaji oo ka warramay buugag ay qoreen qaarna qoraalkooda ay gacanta ku hayaan. Abuukar Aadan ayaa sheegay in uu wax ka qoray “aruurinta canshuuraha ee ku salaysan nidaamka casrigaa iyo buug kale ee uu kaga hadlay “Federaalka maanta”.
Dhab ahaantii, golahan wuxuu soo jiitay yiddidiilada dhallinyaro cusub oo doonaya in ay wax qoraan, kuwaas oo ay ka mid yihiin, kuwo weli daba taagan himiladoodii ahayd in ay qoraan waxa maankooda ku jira iyo wixii ay nolosha ka barteen.
Barnaamijkaan oo ay kasoo qayb galeen ardayda Jaamacadaha Muqdisho wax ka barta oo tiradooduna kor u dhaafayso 130 arday ayaa Central Youth Link ku bogaadiyey qabashada iyo abaabulidda fagaareyaasha noocan oo kale ah.
Barnaamijka dhiirrigelinta qoraaga Soomaaliyeed oo faah faahsan, waxaad kaga bogan doontaan qormada xigta haddii Alle idmo.
Posted on June 3, 2014 by Abdul
Haddii aan samaano, hoggaankuna wuu samaan. Sida qof caafimaadqaba uu ugu bukoodo dhexjoogida dad jirran, hoggaanka fiicanina wuu ku dhex doorsoomaa, oo ku dhex jirradaa bulshada xun. Haddii aan samaanana, oo wanaagga iyo waxa inaga dhexeeya aannu wada ilaashano, way yartahay in ay dhacdo, in hoggaanku waxa aan rabno uu dhinac maro. Xigmad iyo xadiis wuxuu ahaa ma haleelee, “hoggaamiye kasta waa qoomkiisa”, sidaas awgeed, haddii aan isku-duubni, midnimo, dal-jacayl iyo danguud ilaalin u wada qunno, waxaa hubaal ah in keenna xuni aanu heli doonin waddo uu u maro waxa uu ku hammiyayo.
Masuuliyadda ina saaran walow ay badan tahay, waxaa lagama maarmaan ah in aan u wada qunno ilaalinta dalkeena. Sidee u ilaalin karraa dalkeena? Adiga hakaa bedbaado — ha samayn– wax lid ku ah. Shaqada aad qabanayso ha ahaato mid aan waxyeello gaarsiinayn dalka, dadka iyo deegaanka. Hoggaamiye xun, haku difaacin xumaantiisa adigoo qabiil fiirinaya. Qofka Soomaaligaa waa walaalkaa, waa kugu dal, waa kugu diin, waana kugu diir. Hakaa nabad galo. Qof dhakhtar, injineer, macallin, boolis, milatari (daljir) inoo noqon lahaa maxaa loo dili?!
Diyaar-garaynta Miskaxda Soomaaliyeed
Posted on March 24, 2014 by Abdul
Qoraa Keenyaan ah oo qoray buuggii caanka ka ahaa dugsiyada sare ee Kenya “My Life In Crime” ayaa wuxuu yiri sidatan, “haddii been aad alliftay aad ku cel celiso dhawr jeer, adigii allifay baa run u malayn doona”! Hadaba, marka maalinkasta dhegtaadu maqasho “Madaxweynaha Dowladda B, T iyo J, soo naftaadu aqbali mayso muddo kaddib jiritaanka madaxweyneyaal siman oo isku awood, sharaf iyo maamuus ah? Soo aaminimeysid jiritaanka dalal iyo ummado madax-bannaan oo xuduudo la yaqaan leh?
Haddiiba biyo-dhaceenu halkaas noqon doono,,maannu kala danaysanno inta goori goor tahay oo aannaan maal iyo mood beelin, ama balaayo kale inoo talin? Madaxweyneyaal iyo Dowlado is garab socda, soo macniyan kama dhigna qab-qableyaashii Xamar ka jiri jiray oo kale? Su,aalahan aan isweydiinayno, akhristoow, gooni uma quseeyaan maamulka qoyskaaga iyo kayga, balse waxay quseeyaan Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan, taasoo adiga, aniga iyo maalaayiinkaleba ay qayb ka yihiin. Maxay tahay danta ku jirta 15 madaxweyne oo is feer socda?!
Posted in Youth	| Comments Off on Diyaar-garaynta Miskaxda Soomaaliyeed
Jiilka Cusub; Gabdhaheena
Posted on October 20, 2013 by Abdul
Ayadoo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay dalka halakeeyeen dhibaatooyin amni darro, dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo gurracan, isla mar ahaantaasna arrimaha dalka wax laga weydiin jiray, hoggamiyaal is-magacaabay oo danahooda siyaasadeed sii marsiin jiray tubta qabyaaladda, ayaa waxaa sanooyinkan dambe soo badanaya dhallinta huwan dareenka waddaninimo, kuwaas oo u badan gabdho. Walow aanay jirin, diwaan rasmi ah oo lagu xaqiijin karo tiradooda, waxaa in dhawaalaba isa soo tarayay, tirada gabdhaha ah ee ay ka muuqato waddaniyadda.
Waxaa laysla qiray in dal jacaylkii iyo aaminsanaanta lahaanshihii dhul, uu maanta ku haray gabdhaheena. Ayaandarro, raggii Soomaaliyeed waxa ay u bateen kor ka Soomaali! Waxaa soo shaac baxay midkasta oo wax saxiixay, saxiixaas oo dalka iyo dadka liddi ku ah uu ahaa nin. Maanta oo aan jogno, waxa khayradka dalka oo aan wali shuruucdii lagu maamulilahaa la diyaarin saxiixaya oo shirkado aanba horay usii jiri jirin u saxiixaya rag masuuliyad weyn ku magacaaban. Goorma ayaa khayraad dal soo saaristiisa la gali garaa?
Waxaa dal khayraadkiisa la gudo gali karaa in laoo saaro marka, 1) ay jirto nabadgelyo, 2) Dowlad ka talisa dalkoo idil, taasoo awood u leh daaficidda xuduudihiisa dhuleed, biyood iyo mid hawo intaba iyo, 3) in uu jiro sharci cad oo qeexaya sida khayraadka dalka looga faa’iidaysanayo. Aan u noqono mawduucenii ahaa jiilka cusub iyo waddaniyaddee, waxaa lagama maarmaan ah in aanu dhiiro galino gabdheheena, kuna taagerro dal-jacaylka, waddaniyadda iyo hal-abuurka. Waxaan la illaawi karin kaalintii iyo doorkii caddaa ee dumarkeenu ka qaateen xoraynta Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Aqoon-Kororsigii Xubnaha CYL
Posted on July 7, 2013 by Abdul
Bishii May 25 keedii illaayo 26keedii, waxaa magalaada Nairobi ka dhacay aqoon korosi ay soo qabanqaabisay Central Youth Link, kaasoo ay ka faa’iideysteen 16 qof oo badankood xubno ka ah ururka dhallinta Soomaaliyeed ee Central Youth Link. Aqoon-kororsigaan oo ay bareyaal ka ahaayeen Christiane Seehausen oo ka socotay Xarunta Nabadda iyo Wadahadalka ee Nansen, taasoo fadhigeedu yahay Lillehammer, Norway iyo Jaalle Stanley oo ka socday JP-Network ayaa lagu qaadaa-dhigay saddex (3) mowduuc oo muhiim ahaa, kuwaas oo kala ahaa: b) Wada-xaajoodka, t) Xallinta iyo ka hortagga khilaafka, iyo j) Xiriirka iyo Hoggaaminta.
Aqoon-Kororsigaan ayaa gogoldhig u ahaa, dadaal ay CYL ku doonayso in ay ku tababarto kuna soo saarto tababareyaal badan oo dhallinyaro ah, aqoona u leh mowduucyada kor ku xusan. Barnaamijka lagu tababarayo tiro door ah oo kor u dhaafaya 40 qof, ayaa lagu wadaa in uu dhaco bilowga sannadka foodda inagu soo haya ee 2014 ka, haddii Alle idmo, kaasoo lagu wado in uu ka dhaco, caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, iyo magaalo madaxda MG ka Puntland ee Garowe.
CYL waxaa ka go’an dhiiro galinta iyo abaabulka dhallinta Soomaaliyeed, si loo soo celiyo doorkii wanaagsanaa ee lagu aqoon jiray dhallinta Soomaaliyeed, isla mar ahaantaasna looga gudbo qabyaaladda iyo reeraysiga. Waxaa xasuus mudan doorkii ku dayashada mudnaa ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay qaateen waqtigii gobonimo doonka intii u dhaxaysay 1940kii-1960kii, iyo ol-olihii horumarinta Af-Soomaaliga ee 1974kii-1975kii.
Posted on October 27, 2012 by cylink
Although written in 2010, it is still valid, relevant and up-to-date
The paper below written by Mohamed Abdullahi in April 2010 was partially adopted by the Government of Farmajo in that year, particularly in the security and welfare of the armed forces aspects. The incumbent president however, seems to have drawn much of his presidential speech from this strategy, but the question is, will his government be able to implement? Sii Akhri »